पूर्व अर्थमन्त्रि सुरेन्द्र पाण्डेसंग आर्थिक गफ, अहिलेको बजेट कत्ति फलदायी ? (भिडियो) – Etajakhabar
पूर्व अर्थमन्त्रि सुरेन्द्र पाण्डेसंग आर्थिक गफ, अहिलेको बजेट कत्ति फलदायी ? (भिडियो)
पूर्व अर्थमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले रमेश खरेलले आइजिपि बन्न नसकेको रिस पोखेको बताएका छन् । क्यानडा नेपालसँग कुराकानी गर्दै नेता पाण्डेले हिजोको प्रहरीको अहोदामा बसेर आएका खरेलले आज मान्छे भड्काउदै हिड्न नहुने बताए । अन्तरबार्तामा फरक प्रशँगमा कुरा गर्दै भ्रष्टचारमा मुछिएका जो कोहि भएपनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउदै उनले मेरो पार्टिको भनेर जोगाउन थाल्नु राम्रो नहुने बताए ।
भ्रष्टचार पार्टिले नभई ब्यक्तिले गरेपछी ब्यक्ति नै जवाफदेही हुनुपर्ने बताए ।जब सम्म हामिले नगदमा आधारित कारोबार गर्छौ तबसम्म हमिले भ्रष्टचार रोक्न नसकिने बताउदै उनले नगदबाट बन्चित गरेर क्यासलेसमा गए भ्रष्टचार धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुने बताए । उनले यो कुरा सँसदमा पनि धेरै पटक उठाएको बताए ।
दुनिया काहाँ छ र हामिहरु त्यहा कसरी पुग्ने भन्ने आजका युवाहरुको आवश्यकता रहेको बताउदै उनले देशमा गुनासो गर्ने नभई बाटो देखाउने युवाहरुको खाचो रहेको बताए । नेपाली युवाहरुको समस्या आलोचना र बिरोध भएको तर समाधान नभएको उनले बताए । नेता सुरेन्द्र पाण्डेसँगको यो कुराकानीको पुरा भिडियो हेर्नुहोस्
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २७, २०७६ समय: १८:०४:४६